I-Galaxy A7 (2018) ivela kwi-Geekbench ene-Android Pie | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy A7 (2018) ihamba ngeGeekbench ngePie ye-Android
Isamsung yazisa i I-Galaxy A7 (2018) ngoSeptemba walo nyaka. Ngokungafaniyo nee-smartphones ze-A-uthotho ezibhengezwe ngaphambili, isixhobo sizise into entsha kwicandelo eliphakathi. Kwakuyi-smartphone yokuqala efikelelekayo yokuqalisa ngokuseta ikhamera kathathu ngasemva, iyenza ukuba ithengwe ngakumbi kunohlahlo-lwabiwo mali kunye naphakathi kuluhlu lwee-smartphones ezikhutshwe yi-Samsung kulo nyaka.
Ifowuni ibikhona ngoku kubonwe kwiGeekbench esebenzayo kwinkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie, Ecebisa ukuba inkampani yaseMzantsi Korea yenza inkqubela phambili kunye nohlaziyo oluzinzileyo lweGalaxy A7 (2018).
Ukongeza, i I-Samsung Galaxy A7 (2018) I-SM-A750FN ivele kwi-Geekbench ngenkqubo yokusebenza ye-Android 9 Pie. Ngelixa singalindelanga ukuba inkampani iqale ukutyhala uhlaziyo oluzinzileyo lwePie ye-Android ye-smartphone okwethutyana, uluhlu luyenza icace gca ukuba inkampani yaseMzantsi Korea okwangoku ukuvavanya uhlaziyo ngaphakathi. (Fumanisa: I-Samsung Galaxy A7 (2018) ifika eSpain)
I-Samsung Galaxy A7 (2018) ene-Android Pie kwiGeekbench
Ngokubhekisele kumanqaku ebhentshi, isixhobo sifumene amanqaku e-1,686 kuvavanyo olusisiseko kunye namanqaku angama-4,894 kuvavanyo oluphambili. Uhlaziyo lwePie lwe-Android lweGalaxy A7 (2018) luya kulungiswa kakuhle kwaye nabasebenzisi baya kuba nakho ukuphucula ukusebenza kwenkqubo.
Ngelixa i-Samsung iqinisekisile ukuba iya kuzisa ujongano lwayo Enye i-UI I-Android kunye nohlaziyo lwePie kwiimodeli zayo eziphambiliAkucaci ukuba izixhobo ezinje ngeGalaxy A7 (2018) nazo ziya kufumana umaleko omtsha ohlaziyiweyo.
Kulindelwe ukuba i-Samsung izakuqala ukumilisela uhlaziyo oluzinzileyo lwe-Android Pie ngonxibelelwano olutsha lomsebenzisi kwiziphelo zayo ezininzi, ezinje ngothotho Galaxy S9 kunye Galaxy Note 9 ukuqala kwinyanga ezayo. Uluhlu lwee-smartphones ze-Mid-range ziya kuthi zifumane uhlaziyo lwePie ye-Android ngamanye amaxesha ekupheleni kwe-Q2019 okanye i-QXNUMX XNUMX.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy A7 (2018) ihamba ngeGeekbench ngePie ye-Android